कुर्कुचा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यो हो निको पार्ने विधि घरेलु बिधि ! मुक्ति पाउनका लागि.... - Onlines Time
कुर्कुचा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यो हो निको पार्ने विधि घरेलु बिधि ! मुक्ति पाउनका लागि….
November 13, 2020 November 13, 2020 by onlinestime
तपाईको खुट्टाको कुर्कुच्चा फुटेको छ भने त्यसले तपाईंको चिन्ता बढाउँछ । यो समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि महिलाहरु विभिन्न उपायहरु अपनाउने गर्छन् । विभिन्न क्रिम र लोसन लगाउने गर्छन् । तर, त्यस्ता क्रिमले कुनै असर गर्दैन ।कुर्कुच्चा सफा गर्नुपर्छ:नुहाउँदा आफ्नो कुर्कुच्चालाई स्क्राबले सफा गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा मृत छाला र फोहोर निस्कन्छ । बाहिरबाट घर आइसकेपछि आफ्नो खुट्टालाई तातो पानीमा डुबाएर सफा गर्नुपर्छ ।
कुर्कुच्चालाई नरम बनाउनुपर्छ:पैतालामा तेल ग्रन्थी नभएका कारण यो सधैं सुख्खा हुन्छ । त्यसको लागि तपाईं राति सुत्नु अगाडि त्यसमा तेल अथवा क्रिमले मसाज गर्नुपर्छ ।केराको गुदी:फुटेको कुर्कुच्चामा केराको गुदी लगाउनुपर्छ । त्यसलाई १० मिनेटसम्म राखेर त्यसपछि चिसो पानीले धुनुपर्छ । जबसम्म तपाईंको खुट्टा राम्रो हुँदैन । तबसम्म दिनमा एक पटक गर्नुपर्छ ।
कागती:खुट्टालाई कागती र तातो पानीको घोलमा १५ मिनेटसम्म डुबाउनुपर्छ । पैतालालाई स्क्राब गर्नुपर्छ । राम्रोसँग धोएर मोइस्चराइजर लगाएर मोजा लगाउनुपर्छ ।ग्लिसिरीनको घोल:आधा बाल्टिन पानीमा ग्लिसिरीन हाल्ने र १० मिनेटसम्म त्यस घोलमा खुट्टा डुबाउने गर्नुपर्छ । त्यसपछि चिसो पानीले खुट्टा धुनुपर्छ र आफैं सुक्न दिनुपर्छ । खुट्टा सुकेपछि लोसन लगाएर आफ्नो खुट्टालाई नरम बनाउन सकिन्छ ।
मेवाको गुदी;सुख्खा कुर्कुच्चालाई पाकेको मेवाको गुदिले मसाज गर्नुपर्छ । यसो गर्दा पैताला धेरै फुट्न पाउँदैन र मुलायम पनि हुन्छ ।दुध र मह:दुधलाई महसँग मिसाउने र त्यसमा आफ्नो खुट्टा १५-२० मिनेटको लागि डुबाउनुपर्छ । त्यसपछि हल्का स्क्राब गर्नु र पछि तातो पानीले धुनुपर्छ ।
नुन;आधा बाल्टी पानीमा नुन हाल्नुपर्छ र राम्रोसँग चलाउनुपर्छ । नुनले तपाईंको कुकुच्चाको मृत छाला निस्कन्छ र खुट्टा कोमल बन्छ ।तेल मसाज;२० मिनेटको लागि तेल मसाज गर्नुपर्छ र १ घण्टाको लागि खुट्टालाई त्यसै छाडिदिनुपर्छ । यो प्रक्रियालाई हप्तामा तीन पटक राति सुत्नु अगाडि गर्नुपर्छ ।
काठमाडौ – सुन्तला स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ ।यसको सेवन प्राय मानिसहरुले गरेको हुन्छन् । यो भिटामिन सि को भण्डार हो ।धेरै मानिसहरुलाई थाहा नहुन पनि सक्छ यसको गुदि मात्र होइन बोक्रा पनि उत्तिकै फाइदाजनक हुन्छ ।
भनेर सुन्तलाको बोक्राले अनुहार सुन्दर बनाउन काम समेत गर्दछ । कपाल एकदम खस्रो छ भने कपाललाई सुन्दर, चम्किलो ,स्ट्रेट बनाउका लागि सुन्तलाको बोक्रा लाभदायी हुन्छ । अनुहारमा दाग, धब्बा भएको छ भने सुन्तलाको बोक्रा पिधेर लगाउदा निकै लाभदायिक हुन्छ ।
अनुहारमा बढि चिल्लो छ भने सुन्तलाको बोक्रा पिँधेर त्यसमा बेसन मिसाएर अनुहारमा लगाउँदा अनुहारको चिल्लोपन हटेर जाने हुन्छ । साथैँ सुन्तलाको बोक्राको सेवनले क्यान्सर तथा हड्डीको समस्या भएकाहरुका लागि पनि फाइदा हुने गर्दछ ।
यो पनि पढ्नुस …काठमाडौँ । विभिन्न किसिमको पोषक तत्वले भरिपूर्ण मेवाको सेवन विभिन्न किसिमको रोगहरूबाट आराम दिन निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसमा भिटामिन सी को भण्डार हुन्छ । यसलाई काँचो वा पाकेको दुवै किसिमको रूपमा खान सकिन्छ । कोलेस्ट्रोल कम गर्न, वजन घटाउन, इम्युनिटी र आँखाको रोशनी बढाउनमा यो निकै उपयोगी हुन्छ ।
जन्डिस हुने स्वम्भावाना स् मेवामा पाईने पपाइन र बिटा केरोटिन नामक पदार्थको कारण शिरीरमा जन्डिस र अस्थमा जस्ता खतरनाक रोगहरूको सम्भवना निकै बढ्छ । मेवामा यी दुवै पदार्थको प्रशस्त मात्रा पाईन्छ ।
किड्नीमा पत्थरी स् हुनतस् मेवाको सेवनले क्यान्सर, हाइपरटेन्शन, ब्लड भेसेल डिसअर्डरबाट सुरक्षा मिल्छ तर एक अध्ययनमा यो कुरा पनि पत्ता लागेको छ कि मेवाको अत्यधिक सेवनले किड्नीमा पत्थरीको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । मेवामा अधिक मात्रामा पाईने भिटामिन सी यसको लागि जिम्मेवार हुन्छ ।
Prevयदि तपाईको हातमा ‘X’ चिन्ह छ भने तपाईमा छ यस्तो खास राज, जान्नुहोस् के हो त त्यो ?
Nextयी संकेतबाट थाहा हुन्छ गर्भमा छोरा छ कि छोरी ?